ပျို့မဆိုရှငျလနျးဖြစ်ရပ်လြော့နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ ပင်ကလေးစောင့်ဆိုင်း။ မလွှဲမရှောင်ဖြစ်ပါသည်, နှင့်အခြားသူများကိုဤမနှစ်မြို့ဖွယ်ဖြစ်ရပ်ဆန်းရာထူးအတွက်အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏တစ်ဦးမဖြစ်မနေ attribute ကိုမပေးကြောင်းအပြင်းအထန်တောင်းဆိုနေချိန်တွင်သူကရိုးရိုး, ဆက်လက်ရှင်သန်ရန်လိုအပ် - ဒါပေမဲ့တချို့ကြောင့်နံနက်အနာရောဂါဟုဆိုသည်။ ဤဆောင်းပါး၌ငါတို့သည်ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေအတွက်အဆိပ်အတောက်အမျိုးအစားများကိုကြည့်အဓိကရောဂါလက္ခဏာတွေခွဲထုတ်ခြင်းနှင့်သင်ကရှောင်ရှားနိုင်မယ်ဆိုရင်မြင်ရလိမ့်မည်။
Toxicosis ကိုယ်ဝန်၏ဒုတိယတစ်ဝက်တွင်အမျိုးသမီးများကိုနှိပ်စက်နှောင်းပိုင်း, အစောပိုင်းပထမဆုံးသုံးလပတ်ခွဲခြားနှင့်ပိုပြီးအန္တရာယ်ရှိ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ဆရာဝန်တွေပြင်းထန်မှုအတွက် toxicosis ကိုဝေ: အလင်း, အလတ်စားနှင့်အကြီးစား။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အစောပိုင်း toxemia ၏အမှု၌အဘယ်သို့ပြုသနည်း
မူးယစ်အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ပထမဦးဆုံးလက္ခဏာတွေသူမသည်ကိုယ်ဝန်ရှိခဲ့ကြောင်းလေ့လာသင်ယူမီကပင်သတိထားမိနိုင်ပါတယ်။ အစာစားချင်စိတ်များနှင့်အလွန်အကျွံ salivation ၏ပျို့, စိတ်ကျရောဂါ, အရှုံး - ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းပြီးနောက်ချက်ချင်းနီးပါးအစအဦးမှတ်သားထားတဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေအတွက်အစောပိုင်းအဆိပ်၏အဓိကလက္ခဏာသက်သေ။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်၏အကြောင်းတရားများအပြည့်အဝနားလည်သဘောပေါက်ကြသည်မဟုတ်ပေမယ့်အစောပိုင်း toxicosis ယုံကြည်နေသည် - "အပိုဆု" ပထမ 15 ပတ်ကြာ, အချင်းမရှိသေးပါဖွဲ့စည်းခဲ့မရှိသေးပေ, နှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုယျခန်ဓာကိုကာကွယ်ပေးမပေးနိုငျသောအခါ။ အသီးအားဖြင့်လျှို့လျှို့ဝှက်ဝှက်ဇီဝဖြစ်စဉ်ထုတ်ကုန်, အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေတဲ့, သွေးကြောရိုက်ထည့်ပါ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ဤအခြိနျတှငျအနံ့၏စင်တာများ၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်တိုးမြှင့်ကြောင်းဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲ (အခြို့သောဟင်းလျာများမှဤအရပ်မှအဆိုပါအနံ့သည်းမခံသို့မဟုတ်ခြင်းကိုမနှစ်သက်) ရှိပါတယ်။ တချို့ကဆရာဝန်များကအဆိပ်၏အကြောင်းတရားများကလေးမွေးဖွားသို့မဟုတ်ကလေးများရှိသည်ဖို့မသိစိတ်တစ်ပိုင်းတွန့်ဆုတ်နဲ့ဆက်စပ် psychogenic အချက်များကြောက်ရွံ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ကယုံကြည်ကြသည်။ သူမကအဆိပ်၏လက္ခဏာမဖြစ်လျှင်ထက်ပိုမိုမြင့်မားတဲ့ထပ်ဇာတ်လမ်း၏, အန္တရာယ်သိုသောအခါ, သင်၏အမိပြင်းထန်ပျို့ခြင်းဖြင့်ညှဉ်းဆဲခံခဲ့ရလျှင်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများ Toxicosis ကုသမှု
အလယ်အလတ်နှင့်ပြင်းထန်သောမူးယစ်မသင်မနေရကုသမှုဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အစောပိုင်းနံနက်အနာရောဂါကဦးနှောက်၏ဖွဲ့စည်းခြင်း၏အစမှာဖြစ်ပေါ်ခြင်း, မကြာခဏ (ထက်ပိုမို6ကြိမ်တစ်နေ့လျှင်) သန္ဓေသားမှအန်, ထောက်ပံ့ရေးအာဟာရ dehydrating နှင့်၎င်း၏ပုံမှန်ပုံစံထိခိုက်။ ဆေးရုံအတွက်စာမေးပွဲနှင့်နောက်ဆက်တွဲကုသမှုခံယူဖို့အတင်းအကျပ်ပြင်းထန်မူးယစ်နှင့်အတူမျှော်မိခင်ကြောင့်ဖြစ်သည်။
ကလွယ်ကူ toxicosis (အန်ကြိမ်နှုန်း - ထက်ပိုမ5ကြိမ်တစ်နေ့လျှင်) မှကြွလာသောအခါသည်အခြားကိစ္စများတွင်, ဆရာဝန်တွေစိတ်ရှည်ခြင်းနှင့်မကောင်းတဲ့ကာလထဲကအစောင့်ဆိုင်းရန်အကြံပေးလိုပါသည်။ သငျသညျ (ဥပမာ, Hofitol, Essliver, Essentiale) ကိုယ်ဝန်အတွက်ဘေးကင်းလုံခြုံ, တက်ဘလက် toxicosis ကနေဆေးရုံကဆင်းနိုင်ပါသည်။ သို့သော်စိတ်ပျက်ဖွယ်ပြည်နယ်သက်သာစေနိုင်ကြောင်းကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုအချိန်-စမ်းသပ်ပြီးနည်းစနစ်ရှိပါသည်။
ကိုယ်ဝန် toxemia တစ်တစ်လောကလုံးနည်းလမ်းမတည်ရှိပါဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုနှင့်အတူစတင်ဖွင့်ကြပါစို့။ တစ်ခုအံ့သြဖွယ်အချိန်အတွက်လည်းတစ်ဦးချင်းစီလုပ်ငန်းစဉ်များ။ ကျနော်တို့ပျို့နှင့်ဆက်ဆံရာတွင်၏အခြေခံနည်းလမ်းများကိုတင်ပြ:
အသုံးအများဆုံးထောက်ခံချက်ဖြည်းဖြည်းမကြာခဏစားရန်ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့။ အချင်းယောက်ျား Now ကိုစောင့်ရှောက်မှုကိုပြသခြင်းနှင့်အိပ်ရာများတွင်တစ်ဦးအလင်းမနက်စာအတူသင်တို့လိုက်မယ်ဖို့အချိန်ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ဦးအလျားလိုက်အနေအထားအတွက်အစာစားခြင်းတစ်ဦးအချည်းနှီးသောအစာအိမ်အန်ပေါ်တွင်နံနက်ရှောင်ရှားဖို့ကူညီတော်မူမည်
နေ့စဉ်နှစ်နာရီတစ်ဦးအလင်းရေစာပစ်။ အများအားဖြင့် crackers, ငန်ဒိန်ခဲ၏ချပ်, သံပုရာသို့မဟုတ်ဖရဲသီး၏ချပ်, Mint "ကူညီ";
မသောက်ရ (သို့သော်ဘောဇဉ်ကနေခွဲထုတ်!) ။ သင့်လျော်သော alkaline များဓာတ်သတ္တုရေ, ဂျင်းသို့မဟုတ် Peppermint လက်ဖက်ရည်;
တိုးမြှင့် salivation သို့မဟုတ်ပျို့အောက်မှာ mouthwash ပညာရှိသို့မဟုတ်ပူစီနံဟင်းရည်ကူညီပေးသည်;
ပျို့ညနေပိုင်းတွင်လုပ်ကြံခဲ့လျှင်အများစုမှာဖွယ်ရှိသောကြောင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေတဲ့ signal ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖြေလျော့ခြင်းနှင့်အိပ်ခွင့်ပြုရန်။
ဒါဟာမိသားစုကိုသင့်အနေအထားသို့ရောက်ကြ၏နှင့်သင့်အားစိတ်ဝိညာဉ်, ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်ချက်ပြုတ်ကိုစိတျဆိုး၏အသုံးပြုမှုကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ကြိုးစားခဲ့ရာ၏အနံ့ကိုသင်မနှစ်မြို့ဖွယ်စိတ်ခံစားမှုကိုအလွန်အရေးကြီးသည်။ sensitivity ဆွေမျိုးများစိတ်ကျရောဂါ, သိမ်းယူမှုသို့မဟုတ်ဤအကြိမ်ပုံမှန်သောစိတ်ခံစားမှုများမကြာခဏအပြောင်းအလဲများကိုသက်သာစေနိုင်ကြောင်းကူညီပေးပါမည်။ ချင်း၏ဖွဲ့စည်းခြင်းပြီးစီးသည့်အခါစည်းကမ်းအဖြစ်စောစော toxicosis အဆုံးသတ် - 16 အပတ်ကအခွအေနေတည်ငြိမ်သင့်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်နှောင်းပိုင်းတွင် toxicosis - ဘာလုပ်သနည်း
ဒါကစောစောပိုင်းမူးယစ်မတူဘဲအတွက်မကြာခဏကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံ aspiring mom, သို့မဟုတ်အချို့သောရောဂါများ (နှလုံးရောဂါ, ကျောက်ကပ်ရောဂါ, endocrine မမှန်, အဝလွန်ခြင်း) နဲ့ဆက်နွယ်သောရှားပါးဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပါသည်။ များသောအားဖြင့်နှုတ်ကပတ်တော်ကို "mellitus" (ကိုယ်ဝန် toxicosis ဒုတိယတစ်ဝက်), အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အဆိုပါမီးယပ်သားဖွားမှာဧည့်ခံမှာကြား (34 ရက်သတ္တပတ်ပြီးနောက်) ကိုယ်ဝန် toxicosis ဒုတိယတစ်ဝက်ကအမြဲပျို့ခြင်းနှင့်အန်ထဲမှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုကြသည်မဟုတ်။ preeclampsia ၏ Insidious တစ်ခါတစ်ရံရောဂါလက္ခဏာကိုသာလေ့လာမှုမှာရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်ဖြစ်ပါသည်: Hidden ဖောဒါမှမဟုတ်ဆီးထဲမှာပရိုတိန်း၏ရှေ့မှောက်တွင်။ ထိုအခါအကျိုးဆက်များ - သန္ဓေသား၏အောက်စီဂျင်ငတ်မွတ်ခေါင်းပါး, မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအာဟာရအတွက်အခက်အခဲကြောင့်။ ဆရာဝန်ဆေးရုံတင်ကုသရန်အပေါ်အလေးအနက်ဆိုသည်လျှင်, အရှုံးမပေးပါဘူး, ကြောင့်ဖြစ်သည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်သောမိန်းမဖို့အကောင်းဆုံးအကြံဉာဏ်ကို - ရောဂါကာကွယ်တားဆီးဖို့သည် သာ. ကောင်း၏, ဒါကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနေစဉ်။ ဒီနေရာတွင်ကိုယ်ဝန်စဉ်အတွင်းနှောင်းပိုင်း toxicosis ရှောငျနိုငျဘယ်လိုဖွင့်:
ကိုယ်ဝန်ရဲ့အစမှာအချက်အပြုတ်အလိုဆန္ဒများကိုကျူးလွန်ခြင်း, အသုံးအနှုန်းအလယ်၌အတန်ငယ်ချသုံးသပ်ပါ။ အရမ်းစပ်သို့မဟုတ်ငန်အစားအစာများကိုအရှုံးမပေး, မီးခိုးဖယ်ရှားပစ်။ အလေးချိန် Follow (တိုးတစ်ပတ်ကို 400 ဂရမ်ထက်မပိုသင့်ပါတယ်), မှန်မှန်သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းတာ;
လတ်ဆတ်သောလေထုထဲတွင်အချိန်ဖြုန်း, ကြွင်းသောအရာ၏ပဒေသာ, အိပ်ပျော်ခြင်းပုံမှန်ဖို့ကြိုးစား;
ကိုယ်ဝန်၏ဒုတိယတစ်ဝက်တွင်အလွန်အကျွံအရည်စားသုံးမှုကိုလြှို့ဝှကျ၏ရောင်ရမ်းခြင်းဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ သင်သည်ထိုရေငတ်တိုးသတိထားမိခြင်း, ဆီးပမာဏကိုရှင်းလင်းစွာသင်အရည်များမသောက်ရငွေပမာဏထက်လျော့နည်းသည်ဆိုပါက - ကဆရာဝန်မှပြသရန်တစ်ဦးအခါသမယဖြစ်၏
အခြောက်လှန်းအသီး compote မသောက်ရ, သင်မူကား pyelonephritis လက္ခဏာတွေရှိပါက - cranberry သီးဖျော်ရည်ကိုသောက်လော့။
ဒါပေမယ့်သင်ကဆေးရုံအတွက်ထားလျှင်ပင်, သင်အိမ်၌သင်တို့၏အသက်ကာလကိုလွန်သောအရာကိုအဘို့, မမေ့မလြော့ပါ။ အလွန်မကြာမီသင်တို့အဘို့စောင့်ဆိုင်းနေသောပျော်ရွှင်မှုကိုအာရုံစိုက်အခြားလူနာ "ထိတ်လန့်ပုံပြင်များ" ကိုနားမထောင်ပါနဲ့။ အားလုံးပြီးနောက်, ကောင်းသောဟာသနှင့်ချစ်ခြင်း - ကိုအကောင်းဆုံးဆေးဝါး!
20 ရက်သတ္တပတ်ကိုယ်ဝန်ဆောင် - ပထမဦးစွာကလေးနှင့်အဆက်အသွယ်နှင့်မိခင်ရဲ့ခံစားခကျြ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် Aktovegin Dropper
Trental - ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ယို
ပဲရစ်ဟီလ်တန်မင်းသားနဲ့ Chris Zielke ချိန်းတွေ့သည်ကို
မီးဖို၌ Belyashi - တစ်အရသာ savory pastries များအတွက်အကောင်းဆုံးချက်ပြုတ်နည်းများ
အာပဒ် Busson Uma Thurman ဥရောပအတွက်သမီးကိုပယ်ရှားဖို့ခွင့်ပြုမထားဘူး
ကျောရိုးအူကျ - ကုသမှု
ပန်းသီး cider ရှလကာရည်၏အကူအညီနှင့်အတူအလေးချိန်ဆုံးရှုံး
အဝါနုရောင်ရှိသောဘဲလေးတိုက်ခန်းဝတ်ဆင်ရန်အဘယ်အရာ မှစ. ?
အိုမီဂါ3- မိန်းမတို့သည်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်အစားအစာများဆံ့များအတွက်အသုံးဝင်သည်ဘာလဲ?
Leeks - ကြီးထွားလာ
အိမ်တွင် chokeberry ကနေစပျစ်ရည်ကို